उद्योग दर्ता कहाँ र कसरी गर्ने? (दर्ता र नवीकरण दस्तुर सहित) - Nayabulanda.com
उद्योग दर्ता कहाँ र कसरी गर्ने? (दर्ता र नवीकरण दस्तुर सहित)
नयाँ बुलन्द २५ जेष्ठ २०७६, शनिबार १९:३१ 517 पटक हेरिएको
इलाम : कुनै पनि उद्योग आधिकारिक रुपमा संचालन गर्नका लागि दर्ता गराउनु पर्छ। दर्ता नगरी चलाएमा त्यसलाई गैरकानुनी मानिनेछ र कारवाहीमा पनि पर्न सकिने सम्भावना हुन्छ। तर उद्योग केकसरी कहाँ गएर दर्ता गराउने तपाईलाई थाहा छ? यसका लागि केके कागजात चाहिन्छ होला र कति दस्तुर तिर्नुपर्छ?
लगानी दर्ता शुल्क (रु.) नविकरण शुल्क (रु.)
३ लाख सम्म १००० ६००
३ देखि ५ लाख सम्म २००० १०००
५ देखि २० लाख सम्म ६००० १६००
२० लाख देखि १ करोड सम्म २०००० ३०००
१ देखि ५ करोड सम्म ३०००० ८०००
५ करोड भन्दा माथि ५०००० १५०००
साझेदारीमा सुरु गरिएको उद्योग हो भने:
१ लाख सम्म ६०० १००
१ देखि ३ लाख सम्म २००० १२५
३ देखि ५ लाख सम्म ४००० १५०
५ देखि १० लाख सम्म ७५०० २००
१० देखि ५० लाख सम्म १०००० २५०
५० लाख भन्दा माथि १५००० ३००
उद्योग दर्ता गराउन कुनै समस्या परेमा यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला: ४२५९८४२, ४२५९८४६, ४२५९८५५, ४२५९८७५
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले दिने सेवाहरूका बारेमा जान्नका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
गजुरमुखीमा लागेको धार्मिक मेला सकियो (भिडियो सहित)
अनेरास्ववियूले बुधबार इलामको मंगलबारेमा प्रदर्शन